Ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ iji zube okporo ụzọ na weebụsaịtị gị | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ntanetị, ọ bụ naanị ka ị kwenye na ị na-elekwasị anya na ntanetị weebụ. Ọnọdụ ndị ahụ gbanwere ọ bụla kwa ụbọchị yana nke ahụ dabere na website okporo ụzọ na -aga na saịtị ịntanetị gị.
Ebumnuche nke na-egwu n'okpuru bụ na ị ruru ndị mmadụ n'otu n'otu iji hụ ebe nrụọrụ weebụ gị. Ihe ndị ha ga-enye ga-abụrịrị ohere ị nwere iji nweta karịa ndị ọbịa na saịtị. Nke ahụ na-egosi ịmatakwu okporo ụzọ weebụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
E nwere ụzọ dị iche iche etu ị ga - esi nwee ike ịkwado okporo ụzọ weebụsaịtị na saịtị gị. N'ime ha bụ mgbasa ozi mgbasa ozi, na-eme ka e guzobe mkpado HTML na ibe weebụ gị, na mgbe nke ahụ gachara banyere saịtị nke ndị ọzọ. Maka nkọwa ọzọ, gaa n'ihu na-agụ n'okpuru.
Mgbasa ozi ederede bụ otu n'ime nnwale yana usoro nyocha iji nweta ndị ọbịa na-elekwasị anya na saịtị gị. Ọbụnadị ihe nghọta web peeji gị bụ, karịa karịa ndị ọbịa na saịtị ị ga-enweta.
Gịnị ma ọ bụrụ na ịnweghị ikike maka ịmepụta ọdịnaya weebụ gị?
Ohere nwere ike ịbụ na ị gaghị enwe oge zuru ezu iji mesoo otu ọrụ yana ịgbanye saịtị gị yana ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ dị n'ịntanetị.
N'ihe niile, isi okwu gị bụ inwe ike ịnye ndị na-ekiri gị ihe dị elu na ibe weebụ gị. Nakwa site na njikwa azụmaahịa dị ukwuu yana ọrụ mgbasa ozi n'aka gị, ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ ọzọ, mana, ebe ị chọrọ itinye uche gị n'inweta okporo ụzọ weebụ yana ọ na - edugakwa, ị nwere ike wepụta otu onye ọzọ azịza nyekwu mkpọsa ngwa ahịa gị na ahịa ya. Nwere ike iji ndị ghostwriters mgbe niile were websaịtị gị.
Na-atụle Blogs dị iche iche
Usoro ọzọ iji nweta ọbụlagodi okporo ụzọ weebụsaịtị na-eji na-atụle saịtị ndị ọzọ nke blọọgụ. Ọtụtụ mmadụ kwụsịrị ịrụ ọrụ iji mata na ha dị irè. Site na ileba anya na ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị weebụsaịtị yana ịhapụ okwu ọgụgụ isi banyere ihe ọ bụla ị maara na ya, ndị na-eru nyochaa nyocha blog gị nwere ike mechaa nwee mmasị ịgbaso njikọ weebụ gị yana ịchọtakwu ihe gbasara gị nakwa ihe ị mụtara gbasara otu ihe na-echu ha ụra.
Asụsụ HTML ma ọ bụ asụsụ hypertext na-abụ ntakịrị teknụzụ maka ndị ọzọ. See na-ahụ na ọ dị mkpa na ị na-etinye akara ngosi aha ziri ezi nke na ụlọ ọrụ ọchụchọ ga-egosi ozugbo ozi ahụ na-achịkọta ihe saịtị gị gbara gburugburu. Mejupụtara nkebi ahịrịokwu isiokwu dị mkpa yana nkwupụta na Meta okwu isi na mkpado ma Meta nchịkọta.
GỤRỤ AHỤ Kedu ihe mgbakwunye WordPress nwere ike imere gị?
Dịka ị nwere ike ịchọpụta ugbu a, ọ dị mfe iji zube okporo ụzọ weebụ na saịtị ịntanetị gị enyere gị ka ị mata ihe ị ga-eme. Gini ga - egbu oge mgbe ị ga - enweta ihu akwụkwọ web gị ugbu a?
Ọnọdụ ndị ahụ na-agbanwe kwa minit ọ bụla yana nke ahụ dabere na ọnụọgụ weebụ wepụrụ na saịtị ịntanetị gị.
Echiche niile nke dị n'okpuru bụ na ị ga-enweta ndị mmadụ n'otu n'otu iji hụ ebe nrụọrụ weebụ gị. E nwere ụzọ dị iche iche otu ị ga - esi nwee ike ịdabere na ntanetị weebụ na saịtị gị. Biputere mgbasa ozi na ire ahia bụ otu n'ime nnwale yana ụzọ nyocha nke ịme ndị nleta saịtị echere maka ịntanetị. See na-ahụ na ọ dị mkpa na ị na-etinye akara ngosi aha ziri ezi nke na ụlọ ọrụ ọchụchọ ga-eweta ozi ahụ ozugbo na-agbakọta ihe ntanetị ịntanetị gbara gburugburu.